Soo dejisan FurMark 1.21 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaFurMark
Bogga rasmiga ah: FurMark
FurMark – software ah si ay u tijaabiso ah xasiloonida iyo waxqabadka of kaarka computer video ah. software The kiimikaysan kordhiyaa heerkulka kaarka video in u saamaxaaya in lagu ogaado cilladaha ee shaqo ee xubno shakhsi by isticmaalaya algorithms gaar ah. FurMark leeyahay qalab horumarsan reserved yeeesha iyo dhaqaajiso ka screen-buuxa ah ama hababka windowed. software wuxuu taageeraa hab gaar ah si uu u hubiyo howlgalka of kaarka video ah inta lagu guda jiro xamuulka muhiim ah. FurMark kuu ogolaanaya in aad is barbar waxqabadka kaarka video la baaritaano ah dadka kale ee ku.
baaritaan dhamaystiran oo ka mid ah sifooyinka kaarka video
Beddelada heerkulka processor ah
Habaysaa heer dhib xisaabinta
hab ee load badnaan on kaarka video
Full-screen iyo hababka windowed
Soo dejisan FurMark
Faallo ku saabsan FurMark
FurMark Xirfadaha la xiriira